Nanangana Bilaogy Ho Fahatsiarovana Ireo Mpikatroka Pelaka Namoy ny Ainy Ny Vondrom-piarahamonina LGBT ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Ελληνικά, Español, বাংলা
Herintaona mahery lasa izay, nalaina an-keriny novonoina ho faty tao amin'ny renivohitr'i Bangladesh, Dhaka, i Xulhaz Mannan, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky LGBT voalohany ao Bangladesh, sy ilay mpikatroka mafàna fo LGBT Mahbub Rabbi.
Tamin'ny 25 Aprily, 2016, nanatevin-daharana ny lisitra lava be an'ireo mpihevitra laika sy vitsy an'isa ara-pivavahana izay nisy namono tao Bangladesh nanomboka tamin'ny 2013 izy ireo (jereo ny tatitra manokana nataon'ny Global Voices).
Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny famonoana azy ireo tamin'ny sioka i Ansar al-Islam Bangladesh (Al-Qaeda ao amin'ny Zana-kaontinanta Indiana). Olona roa misy ifandraisany tamin'ny famonoana hatreto no voasambotry ny polisy, herintaona mahery taorian'ny famonoana, mbola tsy namoaka fiampangana azy ireo ny mpanao famotorana.
Nilaza ireo mpiaro zo ao Azia Atsimo sy manerantany fa i Mannan no tena lasibatry ny Islamista mahery fihetsika noho ny fanamelohana hatrany ny fiarahan'olon-droa mitovy taovam-pananahana sy ny tsy fandeferana amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Bangladesh. Helohin'ny fehezan-dalàna famaizana andininy faha-377 ao Bangladesh, “manohitra ny lamin'ny natiora” ny hetsika ara-nofo, anisan'izany ny lehilahy miray amin'ny lehilahy, ka voasazy faran'izay mafy azo atao, migadra mandrapahafaty any am-ponja. Nampidirin'ny manampahefana Britanika mpanjanaka tamin'ny taonjato faha-19 ny fehezan-dalàna ary nampiasaina ho ny maodely amin'ny lalàna Sodomia ao amin'ny zanatany Britanika maro hafa.
Tamin'ny tsingerintaona voalohany ny famonoana, nanangana bilaogy amin'ny teny Bangla antsoina hoe Dhee ny Boys of Bangladesh, tambajotra lehibe indrindra milaza tena fa lehilahy pelaka Bangladeshy avy ao an-toerana sy any ivelany, mba ho fahatsiarovana ireo niharam-boina sy hanaovana fanentanana manoloana ny manjò ny vondrom-piarahamonina ao anatin'ny firenena maro an'isa Miozolomana, mpandala ny mahazatra.
Ny dikany “Dhee” ara-bakiteny amin'ny teny Bangla dia talenta na faharanintan-tsaina. Anisan'ny tetikasa fiarovana lehibe ho an'ny lesbiana ny bilaogy, izay ahitana tantara an-tsary nivoaka tamin'ny Septambra 2015, mitantara “Ny Tantaran'ny Dhee,” tanora lesbiana noforonina izay nahita ny ara-nofon'izy ireo. Nandritra ny taon-dasa, nampiantrano hetsika fanentanana momba ny lahy sy vavy ary ny ara-nofo tao amin'ny tanàna fito ao Bangladesh ihany koa ny tetikasa Dhee .
Manasongadina lahatsoratra avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBTny bilaogy, izay fahatsiarovana an'i Mannan sy Tonoy ary manazava ny tahotra iainan'zy ireo ankehitriny hatramin'ny nahafatesan'izy ireo. Tsy mitonona anarana ny mpanoratra, ary na dia ny adiresy mailak'ireo mpaneho hevitra aza dia afenina noho ny antony ara-piarovana. Hoy ny vakin'ny fanambarana ao amin'ny bilaogy:
Niasa ho diplaomaty tao amin'ny USAID ao Bangladesh i Xulhaz Mannan ary mpiara-manorina sy mpamoaka ny gazetiboky LGBT voalohany ao Bangladesh antsoina hoe Roopbaan (jereo ny tatitry ny Global Voices). Nivoaka tamin'ny volana Janoary 2014 ny gazety.
Talohan'ny famoahana ny boky, any amin'ny miafina foana matetika ny hetsika LGBT ao Bangladesh, ary notarihan'ny olona vitsivitsy izay mifandray ao amin'ny media sosialy. Shakhawat Hossain avy ao amin'ny Boys of Bangladesh nanoratra tao amin'ny tranonkalam-baovao sy fanehoan-kevitra Wire.in:
Bilaogera hafa nanoratra momba ny fiarahamiasa tamin'i Mannan tao amin'ny gazetiboky LGBT, Roopban:
Mety tsy mandefitra amin'ny olona LGBT ny fiarahamonina Bangladeshy. Nanoratra momba ny fomba niatrehan'i Tonoy korontana tao an-trano noho ny fironany ara-nofo ny olona iray tao amin'ny bilaogy Dhee
Niteraka tahotra tao am-pon'ireo vondrom-piarahamonina LGBT ao Bangladesh ny famonoana an'i Mannan sy i Tonoy. Mpikatroka maro no nanakatona ny kaontin'izy ireo amin'ny Facebook ankehitriny ary nanova laharana telefaonina mba hanafina ny mombamomba azy ireo noho ny fiarovana. Mpikatroka vehivavy nanazava tao amin'ny bilaogy Dhee:
Tamin'ny Aogositra 2016, nahita olona dimy voarohirohy ho nandray anjara tamin'ny famonoana ny mpanao famotorana. Nisambotra ny roa tamin'izy ireo ny polisy, izay nijoro ho vavolombelona teo ambany fizarana faha-164 ao amin'ny Fehezan-dalàna famaizana.
Saingy herintaona mahery hatramin'ny nahafatesan'i Tonoy sy Mannan, tsy nahavita nandefa fiampangana ny polisy na dia nanao ireo fisamborana ireo aza, sy efa nilaza fa “tena azo antoka fa izy ireo no nahavita ny heloka.” Nanome fanalavam-potoana in-12 ho azy ireo ny fitsarana hatramin'ny nisian'ny fisamborana. Vao haingana indrindra, tokony nalefa tamin'ny 8 Mey 2017 ny tatitra sy ny fiampangana nandritra ny fanadihadiana, saingy nahemotra indray ny daty. Nahemotra amin'ny 6 Jiona 2017 ny fandefasana ny fiampangana.